Codsashada Shaqo Marka aad heshid shaqo aad rabtid, waxa aad u baahan doontaa inaad codsatid. Waxa jira dad badan oo shaqo codsanaya, sidaa daraadeed dhib bay noqon kartaa inaad heshid shaqo xiitaa haddii aad leedahay farsamooyinka shaqo ee shaqo-bixiyhu rabo. U hubso inaad codsatid dhawr shaqo. Shaqo-bixiyeyaasha qaarkood waxay rabi doonaan in la sameeyo kaliya codsi qoraal ah (application) qaarna waxay rabi doonaan oo kale waraaqda koobitaanka taariikh shakhsiyeedka (resume), iyo waraaq hordhac ah (cover letter), ama labadaba.
Wax ka baro codsiyada shaqada, waraaqaha koobista taariikhda qofka iyo waraaqaha lifaaqa ah iyo sida loo codsado shaqooyin. Codsashada Shaqo
Ku soo dhowow Buuga shaqa ka Raadinta Internetka ee looga talo galay laba Af-yaqaanada Isudiyaari shaqa ka codsiga Internetka, ka baar kana buuxi shaqooyinka Internetka adiga oo adeegsanaya (E-mail) marka aad la xiriireysid goobaha shaqada, tixraaca macnaha ereyadan xidigta ku suntan (*) ka eeg bogga ugu dambeya buugan.
Ku soo dhawow Laybareeriga Degmada King County Laamo badan oo uu leeyahay laybareerigu ayaa bixiya fasallo ama waxbarasho BILAASH AH, oo ay ku jiraan Barashada Ingiriisiga Luqad Labaad Ahaan (ESL), Barnaamijka Wakhtiga Hadadlka (Talk Time) iyo Muwaadinnimada. Sidaa daraadeed sii mar Laybareeriga Degmada King County si aad u soo qaadatid qoraalka Wakhtiga Hadalka (Talk Brochure) oo aad u ogaatid fasallada laga bixinayo meel kuu dhow ama nagu soo booqo bartayada internetka oo ah www.kcls.org/esl/soomali/. Waxa aanu rajeynaynaa inaan dhakhso kuu aragno.